OpenSUSE 12.2 RC inowanikwa | Kubva kuLinux
OpenSUSE 12.2 RC inowanikwa
Uye pakupedzisira kuvhurwa kwe OpenSUSE 12.2! Mushure mekumirira kunonoka kwakawanda, iyo vhezheni inowanikwa Release Candidate.
Zvimwe zvezvinhu zvitsva zvinosanganisira:
Kwidziridzo kuGrub 2.0
Gadzirisa mamwe systemd bugs
Kwidziridzwa kuZypper 1.7.3 pamwe neibzypp raibhurari. YaST kugadzirisa
Kusimudzira mapakeji akasiyana siyana, mamwe acho anosanganisira VirtualBox, nmap, R, pango, Go, phpmyadmin, vym, aria2, nzungu, mariadb, uye jedit
Mhinduro kune mamwe matambudziko eALSA
Diki-tsananguro yekuvandudza kune iyo KDE, GNOME, LXDE uye XFCE nharaunda, pasina hukuru hukuru. Basa riri kuitwa kuyedza kudzikisira kukanganisa uko KDE 4.90 inogadzira muFekitori; kana mamiriro aya akagadziriswa, zvinokwanisika kuti iyi yekuvandudza ichabatanidzwa mune yekupedzisira vhezheni
Mahara Hofisi 3.5.4.6
Isu tinofanirwa kuziva kuti mune yekupedzisira vhezheni zhinji dzimwe shanduko dzinogona kuitwa. Mwedzi waNyamavhuvhu unenge wakanyanya maererano nekugadzirisa zvipembenene, uye musi wa2 wemwedzi iwoyo unotarisirwa kuve neCR yechipiri. Pakati paSeptember, iyo yekupedzisira vhezheni yeOverSUSE 12.2 inofanira kunge yakagadzirira kuburitswa.
Dhawunirodha OpenSUSE 12.2 RC 1
Kutenda Juan Carlos Ortiz nemupiro!
Anofarira ita mupiro?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » OpenSUSE 12.2 RC inowanikwa
kuti kana iwe wanga usingazive, kuyedza kuisa KDE 4.9 muna 12.2
Zvakanaka sei; Ndinoda kuzviedza
10 Mapuratifomu ekudzidza kuronga